Ixabiso elincinci leNkunkuma kunye noMgquba weTank Compost Ukwenza abaXhasi boMatshini kunye neFektri | YiZheng
Inkqubo ye- Ukwenza umgquba nkqo Itanki yokuvumba ubukhulu becala isetyenziselwa ukujika kwaye kuxutywe inkunkuma ephilayo efana nomgquba wezilwanyana, inkunkuma yamdaka, iswekile yokuguqula udaka, isidlo esibi kunye nentsalela yamaphepha esarha kunye nenye inkunkuma ye-organic ye-anaerobic fermentation. Lo matshini usetyenziswa ngokubanzi kwizityalo zezichumiso eziphilayo, indawo yokulahla udaka, indawo yokulima izityalo, ukubila kokubola kabini kwesipore kunye nokususwa kokusebenza kwamanzi.
Umatshini unokuvundiswa iiyure ezingama-24, egubungela indawo ye-10-30m2. Akukho kungcoliseka ngokwamkela ukubila okuvaliweyo. Inokuhlengahlengiswa kwi-80-100 temperature iqondo lobushushu eliphezulu lokuphelisa izinambuzane kunye namaqanda ayo ngokupheleleyo. Singavelisa i-reactor 5-50m3 amandla ahlukeneyo, iifom ezahlukeneyo (ngokuthe tyaba okanye ngokuthe nkqo) kwitanki yokubila.
Yintoni inkunkuma ethe nkqo kunye neTank?
Ukuma kweNkunkuma kunye neTanki yokuVumba ineempawu zexesha elifutshane lokuvumba, gubungela indawo encinci kunye nendawo enobuhlobo. Itanki evaliweyo ye-aerobic tank ineenkqubo ezilithoba: inkqubo yokondla, isililo reactor, inkqubo yokuqhuba ngesanti kubunzulu baphantsi, inkqubo yokungenisa umoya, inkqubo yokukhupha, inkqubo yokukhupha kunye nokuphelisa amandla, iphaneli kunye nenkqubo yolawulo lwe-elektroniki. Imfuyo kunye nomgquba weenkukhu kucetyiswa ukongeza isixa esincinci sezinto ezinje ngomququ kunye ne-inoculum encinci ngokubhekisele kubumanzi kunye nexabiso lobushushu. Inkqubo yokondla ifakwe kwisitya sesilili, kwaye ilindle lichukunyiswa zizinto zokuqhuba zokwenza imeko eqhubekayo yokuphazamiseka esiseleni. Kwangelo xesha, izixhobo zomoya zokubuyisa ubushushu kunye nezixhobo zokufumana ubushushu zibonelela ngumoya oshushu womoya kwiifilitha zokuhambisa umoya. Kwakhiwa indawo yomoya efanayo eshushu ngasemva kweleyidi, edibene ngokupheleleyo nezinto zonikezelo lweoksijini kunye nokudluliswa kobushushu, ukungabikho kobushushu kunye nokungenisa umoya. Umoya uyaqokelelwa uze uphathwe ezantsi kwesisele ngesitaki. Iqondo lobushushu etankini ngexesha lokuvunda linokufikelela kuma-65-83 ° C, anokuqinisekisa ukubulawa kwezifo ezahlukeneyo. Umxholo wokuqukethwe kwezinto emva kokuvumba umalunga ne-35%, kwaye imveliso yokugqibela ikhuselekile kwaye ayinabungozi kwisichumiso sendalo. Isisombululo siphelile. Emva kokuba ivumba liqokelelwe ngombhobho ophezulu, iyahlanjwa kwaye isuswe ngesitshizi samanzi kwaye ikhutshelwe kumgangatho. Sisizukulwana esitsha se-organic fermentation tank efanelekileyo kwimimandla eyahlukeneyo, ngokusekwe kwizixhobo ezifanayo nangokuphucula kunye nokuphucula. Inqanaba lobuchwephesha eliphambili kunye nokuthandwa sisininzi sentengiso.
Yiyiphi inkunkuma ethe nkqo kunye neTower Fermentation Tank esetyenzisiweyo?
Izixhobo zeTank ezizenzekelayo zingasetyenziselwa ukunyanga umgquba wehagu, umgquba wenkukhu, umgquba weenkomo, umgquba weegusha, inkunkuma yamakhowa, inkunkuma yamayeza amaTshayina, umququ wezityalo kunye nenye inkunkuma.
2. Ifuna kuphela iiyure ezili-10 ukugqibezela inkqubo yonyango engenabungozi, eneenzuzo zokugubungela ngaphantsi (umatshini wokubola ugubungela kuphela indawo ye-10-30 yeemitha zesikwere).
3. Olona khetho lulungileyo kukuqonda ukusetyenziswa kwezixhobo zamachiza kumashishini ezolimo, ezolimo setyhula, ezolimo nendalo.
4. Ukongeza, ngokweemfuno zabathengi, sinokwenza ngokwezifiso amandla angama-50-150m3 amandla kunye neefom ezahlukeneyo (ethe tyaba, ethe nkqo) yetanki lokuvundisa.
5. Kwinkqubo yokubila, i-aeration, ukulawula ubushushu, ukuphazamiseka kunye nokususa ilawulwa kungalawulwa ngokuzenzekelayo.
Inkunkuma nkqo kunye neMveliso yeMveliso yeTanki
Ukucoca i-CIP kwi-line kunye ne-SIP sterilization (121 ° C / 0.1MPa);
2. Ngokwemfuno yococeko, uyilo lolwakhiwo luphuculwe kakhulu kwaye kulula ukuba lusebenze.
3. Umlinganiso ofanelekileyo phakathi kobubanzi nokuphakama; ngokwesidingo sokusenza isixhobo sokuxuba, ke ukonga umbane, ukuvuselela, isiphumo sokubila kulungile.
4. Itanki yangaphakathi inonyango lokucoca umphezulu (uburhabaxa uRa ungaphantsi kwe-0.4 mm). Yonke indawo yokuphuma, isipili, umngxunya njalo njalo.
Izinto eziluncedo zeNkunkuma ethe nkqo kunye neTanky Fermentation Tanky
•Uyilo olumi nkqo oluthatha indawo encinci yokuhlala
•Vala okanye uvale uphawu lokuvumba, akukho livumba lomoya
•Ukusetyenziswa okubanzi kwisixeko / ubomi / ukutya / igadi / unyango lwenkunkuma
•Ukufudumeza ngombane ukuhambisa ioyile ngobushushu bokutshisa ikotoni
•Ngaphakathi kunokuba ipleyiti yesinyithi kunye nobunzima be-4-8mm
•Ngengubo yokwambathisa ubushushu ukuphucula ubushushu bomgquba
•Ngamandla ekhabhathi ukulawula ubushushu ngokuzenzekelayo
•Ukusetyenziswa ngokulula kunye nokugcina kwaye kunokufikelela ekuzicoceni ngokwakho
•I-shaft yokuxuba i-shaft inokufikelela ekuxubeni okupheleleyo kunye nokuxubileyo
Ityathanga leplate lokuDibanisa umatshini weVidiyo
Egqithileyo I-Screw Double Composting Turner
Okulandelayo: Uhlobo lweForklift Izixhobo zokufaka umgquba